Madaxwayne Xasan oo markii ugu horeysay Difaacay Hablaha Somaliyed ay u diraan Sacuudiga.. - iftineducation.com
Madaxwayne Xasan oo markii ugu horeysay Difaacay Hablaha Somaliyed ay u diraan Sacuudiga..
iftineducation.com – Madaxweynaha Somaliya Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa markii ugu horeysay ka hadlay gabdhaha Somaliyed ee dalka Sacuudiga Shaqaalaha loogu qaaday, xilli dadka Somaliyed arintaan ay si aad ah u hadal hayaan.
Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu sheegay inuu aad uga xun yahay hadalada qaar doodaha laga keenaayo ee macnaha kale loo yeelaayo, wuxuuna sheegay in gabdhaha Somaliyed kaligood ay safraan oo dhibaatooyin kala duwan ay la kulmaan.
“Aad iyo aad ayaan uga xun nahay Doodaha qaarkood sida loo dhigaayo la soo qaadaayo gabdhaha Somalida, Gabdhaha Somalida hadaba waa ay safraan kaligood ayeey safraan iyagoon Dowlad aan dirin ayeey Safraan iyadoo xuquuqdooda cid ilaalinaysa aysan jirin ayeey safraan waa tahriibaan badaha ayeey maraan Yemen oo dagaal ka socda inta ku dhex lugeeyaan ayeey Sacuudiga galaan.”Ayuu yiri Madaxweynaha Somaliya oo la hadlay Tv-ga Afrika4.
Madaxweynaha Somaliya ayaa sheegay inay dhamaatay dhibaatooyinkii Gabdhaha Somaliyed ay la kulmi jireen, hadana si sharci waafaqsan dalka Sacuudiga ay uga shaqeysanayaan, iyadoo la ilaalinaayo xuquuqdooda.
“Waxaas oo dhan hada waa ay dhamaatay Dowladda ayaa kafaalo qaaday masuuliyad ayeey leeyihiin Xafiisyo iyo masuuliyin ayaa daba socda oo xuquuqdooda ilaalinaya, marka ma jirto dhibaato, hadaba dhibaato ayaa soo gaarta meel sharciga ka baxsan ayeey dhibaato ku gaartaa, laakiin hadii sharciga dhexdiisa dhibaato kugu gaarto si aad u maareyso ayeey leedahay, anaga waxaan rabnaa dadkeena sharciga dhexdiisa inay ku dhex noolaadaan oo ay ku shaqeeyaan hadii dhibaato ku gaareyso Sharciga dhexdiisa hakugu gaarto si loo daba qabto ayeey leedahay, halka hada iyaga oo tahriibaya duurka laga qabto oo lugaha laga xirto oo la adoonsado oo meelo lagu haysto, dadka Somaliyed waxaan leeyahay haka baxaan waxaas gabdhaha Somaliyed wey soo shaqeysanayaan iyaga oo sharaf iyo karaamo leh ayeey dalkooda ku soo noqonayaan, Dowladda Somaliyana wey ilaalinaysaa sharaftooda iyo Karaamadooda.”
DAAWO Gabdhuhu aad Ayeey Ugu Raaxeytaan Xiliga Galmada Marka Lagu Niikiyo